Cnblue အဖွဲ့ဝင်ဖြစ်တဲ့ Lee Jung Shin လေးတစ်ယောက် Love FNC organization နဲ့အတူမြန်မာနိုင်ငံသို့ Volunteer အဖြစ်ရောက်ရှိခဲ့
On February 16, 2018 February 16, 2018 By Naing Naing
၂၀၁၈ခုနှစ် ဖေဖော်ဝါရီလ ၁၁ ရက်နေ့မှာ Cnblue အဖွဲ့ဝင် Lee Jung Shin နဲ့ AOA အဖွဲ့ဝင်ဖြစ်တဲ့ Soel Hyun တို့ဟာ မြန်မာနိုင်ငံကို Volunteer ခရီးစဉ်အဖြစ် ရောက်ရှိလာခဲ့ကြပါတယ်။ သူတို့နှစ်ဦးဟာ Love FNC Organization မှ ဆောက်လုပ်လှူဒါန်းတဲ့ ကလောမြို့မှာရှိတဲ့ ပုဂ္ဂလိကမူလတန်းကျောင်းကြီးဖွင့်ပွဲအတွက် လာရောက်ခဲ့ကြတာ ဖြစ်ပါတယ်။
Love FNC Organization ကို FNC Entertainment မှ ထူထောင်ခဲ့ကြတာဖြစ်ပြီး ပထမဦးဆုံးမတည်ထူထောင်သူတွေကတော့ Cnblue အဖွဲ့ပဲဖြစ်ပါတယ်။ ပထမဦးဆုံး Cnblue School ဆိုတဲ့ကျောင်းလေးကိုတော့ Cnblue အဖွဲ့မှ ၂၀၁၂ ခုနှစ်မှာဆောက်လုပ်လှူဒါန်းခဲ့ကြတာဖြစ်ပြီး ဒုတိယမြောက်ကျောင်းမှစပြီး FNC Entertainment မှ ပူးပေါင်းလာတဲ့အတွက် Love FNC Organization အဖြစ်ပြောင်းလဲခဲ့ပါတယ်။ Love FNC မှာ Cnblue, AOA, Ftisland, Nflying, SF9, Honeyst အစရှိတဲ့ အနုပညာရှင်တို့ရဲ့လုပ်အားဒါနတွေပါဝင်ပါတယ်။
#LoveFNC 감사합니다 #밍글라바
A post shared by 이정신 (@leejungshin91) on Feb 13, 2018 at 9:49am PST
Lee Jung Shin ဟာ ဖေဖော်ဝါရီလ ၁၁ ရက်နေ့ ည ၁၀ ခွဲဝန်းကျင်လောက်မှာ မြန်မာနိုင်ငံကိုရောက်ရှိခဲ့ပြီး သူ့ရဲ့ Fan လေးတွေကလည်း နွေးထွေးစွာနဲ့ ကြိုဆိုခဲ့ကြပါတယ်။ Lee Jung Shin ဟာ ကလောမြို့လေးမှာတည်ရှိတဲ့ Love FNC School ကိုသွားရောက်ပြီး Volunteer အဖြစ်လုပ်ကိုင်ခဲ့ပါတယ်။ Fan တွေရဲ့ပြောစကားအရ Lee Jung Shin ဟာအရမ်းဖော်ရွှေပြီး စိတ်ရှည်တယ်လို့လည်း သိရပါတယ်။ Fan တွေ အပေါ်လည်းအရမ်းချွဲတတ်ပါတယ်တဲ့… ?
Lee Jung Shin ဟာ ဖေဖော်ဝါရီလ ၁၄ရက်နေ့ ည ၁၁ ခွဲဝန်းကျင်လောက်မှာ မြန်မာနိုင်ငံမှပြန်လည်ထွက်ခွာခဲ့ပြီး တောင်ကိုရီးယားနိုင်ငံဆိုးလ်မြို့သို့ အန္တရာယ်ကင်းကင်းနဲ့ ပြန်သွားခဲ့ပါပြီ။ မြန်မာနိုင်ငံမှ Shin Fan လေးတွေလည်း အရမ်းကိုလွမ်းပြီးကျန်ရစ်နေခဲ့ရတယ်ဟုတ်…။ Social Media တွေပေါ်မှာလည်း Shin Fan လေးတွေက Lee Jung Shin နဲ့အတူ သူတို့ရယူခဲ့ကြတဲ့ အမှတ်တရလေးတွေကိုတင်ပြီး ပျော်ရွှင်နေကြပါတယ်။ နောက်တစ်ခေါက်မြန်မာနိုင်ငံကို Cnblue အဖွဲ့သားအားလုံးလာရောက်နိုင်ဖို့ Fan လေးတွေနဲ့အတူတူ ဆုတောင်းပေးပါတယ်…
*ဓာတ်ပုံများ သုံးစွဲခွင့်ပေးတဲ့ CNBLUE Myanmar Page အား အထူးပဲကျေးဇူးတင်ရှိပါသည်။
PREVIOUS POST Previous post: EXO အပါအဝင် SM Artists ၃၅ ယောက်ရဲ့ Dubai မှာကျင်းပမယ့် “SMTOWN LIVE” Concert
NEXT POST Next post: ဖေဖော်ဝါရီ ၁၅ ရက်နေ့မှာ ကျင်းပမယ့် ‘LE GRAND Hip Hop Festival’ ကနေ နုတ်ထွက်ခဲ့ရုံမက Instagram Account ကိုပါဖျက်သွားခဲ့တဲ့ Ji Dam!!!